आज कुन तरकारीको मूल्य कति ? हेर्नुहोस् Canada Nepal
चैत्र ६ २०७७
काठमाडौँ - शुक्रबार नेपाली बजारमा केही तरकारीको मूल्य घटबढ भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका अनुसार अहिले प्याजको थोक मूल्य किलोको ४० देखि ४५ रुपैया रहेको छ ।
त्यस्तै आज गोलभेडाको मूल्य किलोको ३० देखि ३५ रुपैया, आलु किलोको २४ देखि २८ रुपैया, फर्सी किलोको ४० देखि ५०, मुला किलोको ४० देखि ५०, भेण्टा किलोको ५० देखि ६०, गाजर किलोको ४० देखि ५०, बन्दा किलोको १० देखि १५ रुपैया र काउली किलोको ३० देखि ४० रुपैयामा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यस्तै घिउ सिमि किलोको ४० देखि ५०, भिण्डी किलोको १०० देखि ११०, लौका किलोको ४० देखि ५०, बरेला किलोको ४० देखि ५० र घिरौला १०० देखि १२० मा किनबेच भइरहेको छ ।
चैत्र ६, २०७७ शुक्रवार ०८:२१:२३ बजे : प्रकाशित
बैंकमा ५० हजारभन्दा कम रकम जम्मा गर्न नपाइने
काठमाडौं - निषेधाज्ञाको अवधिमा बैंकको खातामा ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम जम्मा गर्न नपाइने भएको छ ।
बिहिबार बसेको नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठकले सबै बैंकलाई खातामा न्यूनतम ५० हजारभन्दा कम जम्मा नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले निश्चित शाखाबाट सम्पूर्ण सेवा प्रवाह हुँदा जोखिम बढेको भन्दै शुक्रबारदेखि विभिन्न ५ सेवा मात्र प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै सङ्घले सबै बैंकलाई खाताबाट नगद झिक्ने, खातामा रु ५० हजारभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने, रकम स्थानान्तरण (चेक, कनेक्ट आईपीएस) आरटी जीएस), विप्रेषण भुक्तानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै यस अवधिमा बैंकले निश्चीत सेवा प्रवाह गर्ने भएपछि अब कर्जा सेवा, नयाँ खाता खोल्ने लगायतका कामहरू रोकिने भएका छन् ।
बैशाख ३०, २०७८ बिहिवार २०:५३:३० बजे : प्रकाशित
सिइडिबी हाइड्रोको आइपिओ बाँडफाँट, कसरी हेर्ने नतिजा ?
काठमाडौँ - सिइडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आइपिओ बाँडफाँट भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँट गरेको हो ।
कम्पनीले यही वैशाख १७ देखि २१ गतेसम्म सर्वसाधारणमा आइपिओ जारी गरेको थियो । संस्थाको आइपिओमा १७ लाख ३३ हजार ९४९ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये १६ लाख ८५ हजार ६२७ जनाको आवेदन योग्य भएको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटकले जनाएको छ ।
आवेदन दिएकामध्ये चार हजार ४४२ जनाको आवेदन रद्द भएको छ । त्यस्तै कूल आवेदकमध्ये १४ लाख तीन हजार ४६४ आवेदकको हात खाली भएको क्यापिटलले जनाएको छ । सोह« लाख ८५ हजार ६२७ जनालाई गोलाप्रथामा सहभागी गराई दुई लाख ३४ हजार १९५ जनाले शेयर १० कित्ताका दरले पाएका छन् । दुई लाख ३४ हजार १९५ जनामध्ये चार जनाले भने ११ कित्ता शेयर पाएका छन् ।
कम्पनीले रु २५ करोड १८ लाख २३ हजार बराबरका २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो । त्यसमा दुई प्रतिशतका दरले ५० हजार ३६५ कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि र पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख २५ हजार ९११ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँट गरी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ता अन्य सर्वसाधारणमा बाँडफाँट गरिएको थियो ।
आइपिओको नतिजा मेरोशेयर, सिडिएसले आइपिओ नतिजाका लागि तयार पारेको वेबसाइट र बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलको वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ ।रासस
जेठ १, २०७८ शनिवार ०८:१५:१८ बजे : प्रकाशित
# सिइडिबी हाइड्रो
काठमाडौं - मुलुकभरका कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अब तीन मात्रै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा तथा पहुँच पु¥याउने सरकारको योजना पूरा हुन लागेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अब धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङको काँडा गाउँपालिकामा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्न बाँकी छ ।
केन्द्रीय बैंकले कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० स्थानीय तहमा (क) वर्गका वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएको जनाएको छ । विसं २०७६ को चैत मसान्तसम्मको विवरणमा भने कूल ७४६ स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका थिए । विसं २०७७ को चैत मसान्तसम्म भने ७५० स्थानीय तहमा शाखा खुलेका छन् ।
बाँकी रहेका स्थानीय तहमा समेत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सूचना सञ्चार तथा अन्य सुरक्षाको प्रबन्ध गरेर छिट्टै वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्ने केन्द्रीय बैंकले विश्वास लिएको थियो ।
ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेत सहज रुपमा वित्तीय सेवा र पहुँच पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि विशेष सुविधा र सुहलियत दिँदै आएको छ ।
यस्तै गत चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १४० रहेको छ । त्यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी, ७४ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । देशभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या १० हजार ५४६ पुगेको छ ।रासस
जेठ १, २०७८ शनिवार १७:०८:३१ बजे : प्रकाशित
# राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
काठमाडौं । आइतबार अमेरिकी डलरसहित केही देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९० रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६५ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ७५ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १० रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ११ रुपैयाँ ८३ पैसा तोकिएको छ। एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८८ रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९० रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ।
जेठ २, २०७८ आइतवार १०:०१:१० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - आइतबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ ।
शुक्रबार तोलाको ९१ हजार ६ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ९ सय रुपैयाले बढेर तोलाको ९२ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेर तोलाको १ हजार ३ सय ५० रुपैयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
जेठ २, २०७८ आइतवार ११:३५:३६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । आइतबार नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
विज्ञप्ति अनुसार निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा लिटरमा दुई दुई रुपैयाँ बढाएको हो ।
अब पेट्रोल लिटरको १ सय २३ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेल लिटरको १०६ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै आन्तरिक हवाइ इन्धनको मूल्य लिटरको ७८ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने यथावत रहेको छ । यो मूल्य आइतबार राती १२ बजेबाट लागू हुनेछ।
जेठ २, २०७८ आइतवार २०:५२:५० बजे : प्रकाशित